Izy moa dia efa kandida filoham-pirenena natolotry ny TIM tamin’ny 2013, ary efa minisitry ny fahasalamana, ary ihany nisahana ny ministeran’ny fanatanjahantena nandritra ny fitondrana Ravalomanana.Ben’ny tanàna tany amin’ny kaominin’Ampasikely – Faritra Alaotra no andraikitra farany nosahaniny.
Hanomboka hiverina hisehoseho sy hanao politika indray i Alain Ramaroson. Rehefa nangina tanteraka sy avy nigadra ity dinaozaoron'ny politika ity, haneho hevitra momba ny raharaham-pirenena. Ny raharaha momba ny nosy manodidina no hanaovany fanazavana sy tsy ekeny raha ny fantatra. Hanetsika ireo mpiara-dia aminy ihany koa izy amin'ity resaka nosy manodidina na iles eparses ity
OLANA AMIN’NY FANENDRENA GOVERNORA
Adivarotra sy don-tabatra be mihitsy ny fametrahana ireo ambina governora tsy voantendry. Ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany ity tena nampisy olana ity. Samy niady ny hametrahana ny olona tiany ho governora ireo olona akaiky ny filoha ka nanomboka teo no nampisy ny adihevitra be. Tafiditra ao anatin'izany ny famaritana ireo distrika tsirairay handrafitra ireoy faritra ireo.
OLANA ARA-TANY ANY NOSY BE
Lasan'ny vazaha daholo ny ankabezan'ny tanin'ireo malagasy kely any Nosy be amin'izao raha ny fitarainan'izy ireo. Tokantrano am-polony maro no nesorina tamin'ny toeraa efa nohajarian'izy ireo an-taonany maro tao Angelikelika. Rehefa manao fanoherana ireo vazaha anefa avy hatrany dia migadra. Olona telo no nidoboka am-ponja omaly noho ny fiarovan’izy ireo ny taniny, hoy ny depiote avy any an-toerana izay miantso vonjy amin'ny fanjakana mba hijery ity olana ity.
Mitontona any amin'ny vadin'i Jo Sourcin indray ny rihitra ankehitriny. Ny antony dia noho ny orinasa Sourcin’ Voyage izay natao amin'ny anarany. Midika ho firaisana tsikombakomba eo amin'izy mivady izany ny nanjo ireo olona marobe voasoloky. Mandeha ny feo fa any Diégo io ramatoa io no miery ankehitriny. Misy koa anefa ny milaza fa efa tafatsoaka any ivelany izy mivady.
SAOFERANA TAKSIBE KAROHANA
Namoahana fampilazàna fikarohana ilay mpamily taksibe izay nandona ramatoa efa lehibe maty tsy tra-drano vokatr'izany. Nitsoaka io mpamily io rehefa avy nahavanon-doza. Rehefa nandeha ny fitoriana ka tsy hita izay nanjavonany no koa tsy namaly antson'ny polisy dia mandeha amin'izay ny fikarohana azy.